सविता भण्डारीको डिप्रेशनको उपचार गरेका डाक्टरले खुलाए सविताको अवस्था, उनलाई अस्पताल भर्ना गर्न भनिएको थियो (भिडियो हेर्नुस्) – Sidha Onlinepatra
ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा बरिष्ठ ब्यक्तीको असामयिक निधन
बुढ्यौलीमा आश्रमको बास : व्यथा एउटै, कथा अनेक
बसले ट्याक्टरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु
३३ किलो सुनकाण्ड : लुटिएको होइन, लुकाइएको थियो सुन
फेरि तानिइन् आरजु देउवा एनआरएनएको विवादमा
आज सूर्य ग्रहण लाग्दै, नेपालमा सूतक बार्न पर्छ कि पर्दैन ?
सोनिकाले सबैथोक दिँदा पनि विहे गर्न नमान्ने को हुन् ? (भिडियोसहित)
जाडोमा ओठ फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसोभए अपनाउनुहोस यि कुराहरु ,तपाइको फुटेको ओठ च्याट्टै हुन्छ
देश चलाउने पैसा नहुँदा कर्मचारीले तलव पनि पाएनन्, कर्मचारीका छोराछोरी स्कुलबाट धमाधम निकालिदै
मुख्य पृष्ठ /Video/सविता भण्डारीको डिप्रेशनको उपचार गरेका डाक्टरले खुलाए सविताको अवस्था, उनलाई अस्पताल भर्ना गर्न भनिएको थियो (भिडियो हेर्नुस्)
सविता भण्डारीको डिप्रेशनको उपचार गरेका डाक्टरले खुलाए सविताको अवस्था, उनलाई अस्पताल भर्ना गर्न भनिएको थियो (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । सविता भण्डारी मृत्यु घटनाका बारेमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कुरा उठिरहेका छन् । माइती र घर पक्षकाहरुबीच उनको मृत्युको विषयमा फरक कुरा आएका छन् । माइती पक्षले घर परिवारका सदस्यले मृत्यु रोज्न बाध्य पारिएको दावी गरेका छन् । घर परिवारले सविता मनोरोगी भएको र उनले निकै कडा औषधि सेवन गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।
डा सैलेन्द्रराज अधिकारी जसले चितवन मेडिकल कलेजमा विगत ११ वर्ष देखि कार्यरत छन् । उनले नै सवितालाई जाँच गरेका रहेछन् । पहिलो पटक २०७७ चैतमा ८ गते डाक्टरकोमा गएको र दोस्रो पटक चैत ११ गते पनि जाँच गर्न गएको उनको कागजातवाट देखिएको छ । सविता भण्डारीको स्वास्थ्यको जाँच गरेका चिकित्सकले सविताको अवस्थाको बारेमा केही कुरा खुलाएका छन् ।
डाक्टरले सविताको बारेमा मिडियामा यति धेरै कुरा वाहिर आएको बारे थाहा नपाएको बताए । उनको मृत्यु भइसकेको बारे अघिल्लो दिन मात्र थाहा पाएको बताए । उनले अन्य डाक्टरहरुले अघिल्लो दिन मात्र कुराकानी गरेपछि मात्र उनले सविताको बारेमा थाहा पाएको बताए । उनले सविता एक जना महिलासंग उपचारका लागि आएको बताएका छन् ।
डिप्रेशन भएर छिप्पिएर गएको उनले बताएका छन् । उनलाई मेजर डिप्रेशन डिसअडर भनेर उनले लेखेको पनि आफुले पाएको बताए । उनले सवितालाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ भनेर प्रेस्किप्सनमा आफुले लेखेको बताएका छन् । अस्पताल भर्ना गर्न उनीहरु नमानेर केही दिन पछि फेरी आउँछु भनेर उनीहरु गएर तीन दिन पछि फेरी आएको बताए । फेरी आउँदा पनि उनको अवस्था उस्तै नै आफुले पाएको बताए ।
नेपाली नायिका सुष्मा कार्कीले ‘नाइटो’ छेडेको भिडियो भाइरल (हेर्नुहोस भिडियोसहित)
चोरीको आरोपपछि शव्द फेरेर शिशिर भण्डारीको ‘फोटो फिरिममा- २’ को भिडियो आयो । युटुबमा आएको १ घण्टामै रेकर्ड राख्यो (भिडियो हेर्नुस)
क्षेत्रीको छोराले गरे अन्तरजातिय विवाह: गाउँमा भयो भब्य स्वागत, सासु-ससुरा खुसीले नाचे (भिडियो हेर्नुस्)
माहानायक बिबादमा धेरै बिरोध आएपछी दिपाश्री निरौला यस्तो अवस्थामा,बहिरियो सोच्नै नसकिन तितो सत्य (भिडियो हेर्नुहोस)
भाईको अन्त्येष्टिमा भावविह्वल महानायक राजेश हमाल (भिडियो हेर्नुहोस् )
46 mins अघि